“Loollanka horyaalka waa uu dhammaan lahaa haddii Manchester City ay…” – Garry Neville – Gool FM
“Loollanka horyaalka waa uu dhammaan lahaa haddii Manchester City ay…” – Garry Neville
(England) 04 Okt 2021. Kaddib markii ay xalay soo dhammaatay ciyaartii horyaalka Premier League ku dhex martay kooxaha Liverpool iyo Manchester City kuwaasoo barbarro 2-2 ah ku kala baxay, ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Garry Neville oo difaaca midig kaga ciyaari jiray Manchester United haatanna ah falanqeeya kubadda cagta ka sheekeeya.
Neville ayaa qaba inay Man City tahay koox cajiib ah balse ay tabeyso gool-dhaliye halis ah isla markaasna horyaalka lagu kala tagi lahaa haddii ay soo qaadan lahayd weeraryahanka Tottenham Hotspur ee Harry Kane.
“Kooxdan City ayaa mid gaar ah, balse hal shey ayaa hor taagan, cid walba oo horyaalka ka ciyaarta ayaa og, qof walba oo ku nool Manchester ayaa og: miyey heleen mid soo si af-jara sida ay kooxaha u rafaadinayaan?” ayuu ku yiri dood uu kaga qayb qaadanayay muuqaal-baahiyaha Sky Sports.
Xiddigii hore ee xulka qaranka England ayaa sidoo kale sheegay inay ciyaartii Anfield qaybteedii hore ay qasab uga dhigeyso Man City inay raadiso weeraryahan dhalin kara 25 illaa 30 gool xilli ciyaareedkii sida uu isaga qabo taasna ay dhalineyso inay January u dhaqaaqdo Kane isla markaana horyaalka oo halkaas ku dhammaado maadaama aanan loo babac dhigi karin.
“Waan ogahay inuu [Pep] Guardiola jecelyahay koox ka dhisan khadka dhexe, balse shakigaas weeraryahan la’aanta ah ayaa jira.
“Haddii ay City heysan lahayd Kane, waxaan idiin sheegayaa inuu haatan weecan lahaa horyaalka, iska illow qaabka uu Kane ku jiro hadda iyo shaqada uu ka qabanayo Spurs, haddii uu ku dhex jiri lahaa kooxdaas ciyaartoyda City ah inuu ka faa’ideysan lahaa fursadahii qaybta hore, isagu waa dahab” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Neville.
Isku soo wada duub e, Manchester City ayaa isku dayo badan u sameysan xagaagan inay lasoo wareegto kabtanka xulka qaranka Ingiriiska hase ahaatee, guddoomiyaha Tottenham ee Daniel Levy ayaa albaabada ka xirtay inuu Kane u dhaqaaqo Etihad Stadium taasoo Citizens bidday weeraryahan la isku halleyn karo inaysan heysan maadaama uu Sergio Aguero ku biiray Barcelona kaddib dhammaadkii qandaraaskiisa.
Khabiib Nurmagomedov oo koob khamri ah ka diiday Ferguson & Jawaabtii uu bixiyay oo ka qoslisay Evra iyo Bolt